I-Adobe Spark yazisa ngesipho samahhala seentsuku ezingama-60 sokuGcwaliswa komhlaba Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-Adobe Spark yasimahla kwiintsuku ezingama-60 kude kube nge-15 kaJuni
UManuel Ramirez | | Uyilo lwewebhu, I intanethi, Ezahlukeneyo
Kule mihla yokuvalelwa U-Adobe Spark ubhengeze ukuba ukusukela namhlanje ukuya kuthi ga nge-15 kaJuni Kulo nyaka, bonke abathengi abafuna ukuyifumana simahla kwintlawulo nganye kaSpark. Iindaba ezivakalayo zokwenza umxholo okwizinga eliphezulu ngendlela yemizobo yenethiwekhi yoluntu, iwebhusayithi kunye nevidiyo ezimfutshane.
Olu phuhliso ayisebenzi kuphela kubasebenzisi abatsha, Kodwa kwabo banobhaliso olusebenzayo kwinkonzo emva kokongeza ezo ntsuku zingama-60 kunye nokufumana ukuhlawuliswa okumiselweyo kwelo nani leentsuku.
Ndiyathetha, yintoni kweli qhagamshelo, uya kuba nakho Rhuma kwiinyanga ezimbini kwiAdobe Spark, Isixhobo esikhetheke ngokukodwa ukwenza loo mizobo iyimfuneko namhlanje kwezo nethiwekhi zentlalo okanye kumaphepha ewebhu. Ngenxa yobungcali obukhulu bezonxibelelwano zentlalo, njenge-Instagram kunye neeNdaba zayo, iifoto zomda wexesha okanye ividiyo, isixhobo esinjengeSpark sikuvumela ukuba wenze umxholo ophandwayo.
Ngomnye umntu onayo ukufikelela kwiipremiyamu kunye neetemplate zokubeka uphawu ngokwesiko, Ithala leencwadi elipheleleyo le-Adobe, izixhobo zokusebenzisana, inkxaso ye-brand-brand, nokunye okuninzi. Kucace gca ukuba le ntengiso inxulumene ngokusondeleyo nomzuzu wokuvalelwa esihlala kuwo wonke umhlaba kwaye apho uninzi olusuka kumakhaya abo lunokufikelela ukusuka namhlanje kwisixhobo esifanelekileyo sokwenza eyona mifanekiso ilungileyo.
Ngapha koko, i-Adobe ifike ngexesha elifanelekileyo kunye nezo Iincwadi zokubala okanye ukuba Ipakethe yezolo ngeAdobe Photoshop ye-iPad kunye neAdobe Fresco. Ngapha koko, iAdobe yeSpark yabelane ngale nto Thumela ngeengcebiso kunye neetemplate kuba kunjalo nceda ubuchule bokwenza amashishini amancinci zeziphi ezizezona zisokolayo kwezi ntsuku zine-coronavirus.
Ixesha elihle loku zama iAdobe Spark mahala iinyanga ezimbini kwaye ke unamava kwindawo yokuhlala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Uyilo lwewebhu » I-Adobe Spark yasimahla kwiintsuku ezingama-60 kude kube nge-15 kaJuni
Molo! Uyazi ukuba ndibhalisile kule "promo" kodwa ndabona nje ukuba bayandihlawulisa mna ngentlawulo yenyanga ... Ndidinga ulwazi (kwaye ndiyazi ukuba ndingalifaka njani ibango), ukuba ungandinika lona, ​​ndingalixabisa
Ngenisa iakhawunti yakho kwaye uthumele i-imeyile ukubona ukuba kwenzeke ntoni. Kwamanye amaqonga xa uhlawulisiwe ungafaka ibango kwaye uthi ukudlulisile.
Ngoku ungalanda umagazini i-Asterix simahla kwaye yintoni enika intsholongwane elungileyo no-Obélix
UGene Dietich usishiya, umzobi wekhathuni ka "Tom noJerry" kunye no "Popeye"